Matanho Akaenzana Akakunda Kutanga Kwevhiki | Martech Zone
Matanho Akaenzana Akakunda Kutanga Kwevhiki
Svondo, November 14, 2010 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Pakanga pasina vakundwa pa Kutanga Svondo pano muIndipolis. Icho chaive muunganidzwa unoshamisa wemazano anoshamisa - mazhinji acho akange atoitwa nezviratidziro zvakakomba. Kudos anoenda Lorraine Bhora for singlehandedly kuisa pamwechete ichi chinoshamisa chiitiko - pamwe nePurdue Research Park - inoshamisa nzvimbo yekuibata pairi. Uyo anokunda aive maStat squared, chishandiso chekutarisa kukanganiswa kuri kuitwa newebhusaiti yako kuburikidza nerevo zvinongedzo.
Dambudziko, iro ini zvakanyorwa pamusoro, ndezvekuti angangoita mabhizinesi ese anorerutsa traffic inoreva yavanowana kubva kuTwitter nekuti vanongotarisa kumatunhu anoreva zveTwitter.com. Twitter.com ingori nezve 18% yeese Twitter traffic.
Pane mimwe mhinduro - sekushandisa makodhi emushandirapamwe paunenge uchipfupisa uye uchigovera ma URL ako… asi izvo zvinongoshanda kune zvinongedzo izvo iwe govera. Imwe mhinduro ndeye kushandisa Bit.ly Pro… zvakare, chete kuyera zvinongedzo izvo iwe govera. Bit.ly Enterprise inokutendera kuti utarise ani yema URL ako akapfupikiswa chero kupi paBit.ly. Asi havazi vese vanoshandisa Bit.ly.
Gomera… inotevera iri kushandisa chishandiso senge Backtweets iyo inofungidzira kusvika kwechero link yawakaisa kunze uko, asi zvakadaro haikupe chero nhamba dzepawebsite kuti kangani kushanya kwakasvika chaizvo kune yako saiti.
Mhinduro yakakwana, chokwadika, ingave yeTwitter kubvumidza mabhizinesi kuti awedzere yavo yavo yemakodhi emakodhi emadomeni avanazvo. Nenzira iyoyo, chero nguva chinongedzo chakaiswa nechero ani kunzvimbo yako, kodhi yemushandirapamwe yaigadziridzwa uye maAnalytics ese anokwanisa kunyoresa ruzivo rwekuti kushanya kwakasvika kupi. Sezvineiwo, Twitter inoita izvi nemazhinji mahukama ayo - seaya avanogovera mumaemail.
Matanho Akaenzana inotarisira kubatsira kurerutsa iyi conundrum… zvirinani nekuyera kukanganiswa kwemaweets ako pane yako saiti. Stats squared inosangana neyako Twitter kuyerera uye Bit.ly kuti upe stats kudzokera kune yako saiti. Kunyangwe ichingoita sekunge inoshanda neBit.ly uye kwete Bit.ly Pro… kureva. ma URL edu akapfupikiswa se mkt.gs asi zvinoita sekunge haina kunyoresa.
Ndine Wishlist ye Matanho Akaenzana:
Iyo yakagadzika kurudyi ikholamu iyo inosanganiswa, ichipa iwo maTweets epamusoro uye anoteedzera-kuburikidza nemitengo (CTRs) nezuva, vhiki nemwedzi.
Iko kugona kwekuona nzira yekuparadzira, kubva kune yekutanga tweet kune vanhu vakadzorera zvakare, uye kangani izvo zvinongedzo zvakadzvanywa.
Iko kugona kwekuona vanhu avo maRL ma link ako zvakanyanya uye, kana zvichibvira, traffic yavakachaira kwauri.
Zvaifadza kuve padare remutongi rezvinhu zvekutanga izvo zvakabva pazano kuenda pakuitwa muvhiki imwe chete. Stats squared ine imwe yekuchenesa imba yekuita uye imwe yekuwedzera budiriro, asi hwaro hwakakura kunze kwebhokisi. Yakarongedzwa zvakanaka, inoyevedza, uye yatoita kunge iri kushanda nemazvo.